Yeroon qabeenya boba'aa keenyatti fayyadamu ga'eera
Itoophiyaan qabeenya albuudaa kanneen akka warqii, gaazii uumamaa, boba'aa, pootaashiifi kanneen biroo kan qabdu ta'uu qorannoowwan yeroowwan gara garaatti geggeeffamaniin mirkanaa'us sababoota adda addaatiin qabeenya kanneen sirnaan baaftee itti fayyadamaa hinturre.
Naannoo Somaalee Itoophiyaa, naannawa Ogaadeenitti kaleessa yeroo jalqabaatiif omisha jikita boba'aa baasuu yaaliif eegalameera. Kunis yeroon qabeenya bo'aa biyyattiitti fayyadamuu keenya ga'uu mirkaneessa.
Jikiti boba'aa baafamuu eegale kun waggaa lama booda al ergiif kan dhiyaatu yoo ta'u, guyyaatti jikita boba'aa 445 ol kenna jedhamee eegama. Biyyattiin al ergii omisha jikita boba'aa kanarraa waggaatti doolaara biiliyoona tokkoo ol akka argattus tilmaamameera.
Sharafni alaa damee kanarraa argamu waggaa waggaadhaan doolaara biiliyoona tokkoon dabalaa kan deemu ta'uufi waggaa torba booda doolaara biiliyoona 7.8 argamsiisuu danda'a jedhamee abdatama.
Biyyattiin jikita boba'aa olaanaa kan qabdu ta'uun qorannoon duraa adeemsifameen mirkanaa'eera. Tokkummaan yeroo ammaa ummatoota biyyattii biraa calaqqisaa jiruufi tattaaffii mootummaan haaromsaa gama hundaan taasisaa jiru qabeenya kanatti haala haqaqabeessa ta'een akka fayyadamnuuf carraa gaarii kan uumuudha.
Qabeenyi biyyaa kun kan waliin misoomsinee waliin karaa haqaqabeessa ta'een irraa fayyadamnu waan ta'eef namni hundi qabeenya kana sirnaan eeguu, kunuunsuufi misoomsuu qaba.
Omishni jikita boba'aa kaleessa eegalame waggaa lama booda al ergiif dhiyaatee sharafa alaa boba'aa biyya alaatii bituuf ba'u hir'isuuf, akkasumas madda sharafa alaa ta'ee dinagdee biyyattii guddisuu keessatti shoora olaanaa qabaata. Alergii omisha boba'aa kanaafis hojiin ujummoo boba'aa gara Jibuutiitti diriirsuu dhiyeenyatti jalqabama.
Boba'aan argame qixa guddina dinagdee waliigalaa biyyattii mirkaneessuun ogganamuu qaba. Kana ta'uu baannaan akkuma Ministirri Muummeen Mootummaa RFDI, Doktar Abiyi Ahmad ibsan bu'aasaarra miidhaansaa waan caaluuf sirnaan itti fayyadamuun dirqama.
Omishni boba'aa kun nageeenya, jaalalaafi tokkummaa keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf hundi keenya qindoominaan hojjechuu qabna. Qaamoleen nageenyaas hojicha milkeessuuf eegumsa gahaa gochuu qabu.
Walumaagalatti, yeroon qabeenya boba'aa keenyatti fayyadamnu waan ga'eef hojiin qabeenya albuudaa qorachuus ta'e baasanii ittifayyadamuufi babal'isuu gara fuulduraattis cimee ittifufuu qaba. Kana yeroo jedhamu dameeleen hojii guddina dinagdee biyyattii utubaa jiranis dagatamuu akka hinqabne hubachuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 4960
Guyyaa mara/All_Days 1642555